Home Wararka Saciid DENI oo qarax lala beegsaday + khasaaraha
Saciid DENI oo qarax lala beegsaday + khasaaraha
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax kolonyo uu la socday madaxweynaha Puntland Saciid Deni barqanimadii maanta lagula eegtay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa kolonyadan lagula beegsaday xilli ay marayeen afaafka hore magaalada Boosaaso, waxaana jugtiisa si weyn looga maqlay magaaladaasi.
Inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhintay ugu yaraan laba askari, halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo ka mid ah ciidamadii la socday Deni.
Sidoo kale ciidamada galbinayey kolonyada madaxweynaha ayaa la sheegay inay rasaas fureen qaraxa, kadib, balse ma jiro wax khasaare ah oo ka dhashay.
Saciid Deni iyo wafdigiisa ayaa safar dhulka uga soo ambabaxay degmada Carmo ee Gobolka Bari, isaga oo markii horena kasoo baxay magaalada Qordho ee maamulkaasi.
Ujeedka safarkiisa ayaa la xiriiro doorashada ka dhaceyso magaalada Boosaaso oo ah deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Puntland.
Boosaaso ayaa waxaa maalmihii u dambeeyey ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, kuwaas oo u badan qaraxyo dhaliyey khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac.
Previous articleMaxay tahay sababta Guddiga Doorashada Federaalka u diideen xubinimada Fahad Yasin?
Next articleMa Laga yaabaa inuu Fahad Noqdo MW Soo Socda ee 2022-26 iyo ka Shishe?
Cabdi qeeybdiid oo Mas’uuliyad loo dhiibay Gal-mudug la tegi La’a Dastuurkiina...
Hanti lagu qiyaasay in ku dhow 2 bilyan oo Dollar ayaa...